आजभोलीका समाचार मै हाँस्न पाएसी अरु के नै चाहियो र ? हाँस्नुस् मज्जाले हाँस्नुस् । व्याङ्ग्य - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home अचम्मका खबर आजभोलीका समाचार मै हाँस्न पाएसी अरु के नै चाहियो र ? हाँस्नुस् मज्जाले हाँस्नुस् । व्याङ्ग्य
आजभोलीका समाचार मै हाँस्न पाएसी अरु के नै चाहियो र ? हाँस्नुस् मज्जाले हाँस्नुस् । व्याङ्ग्य
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: २३ माघ २०७५, बुधबार २२:०८
आजभोलीका समाचार पढेपछि हाँसो थाम्नै नसकिने हुन थाले । तात्तातो समाचार अनुसार सरकारले रोजगार दिने रे यतीमात्रै होर ? रोजगार नपाए कुन्नी कतिका दरले बेरोजगारी भत्तापनि दिने रे । यो समाचार पढेर क्या हाँसो लाग्यो भने ? हाँसो रोक्न नसकेर हाँसेको हाँस्यै भएछु उता आमाले छोरो बौलायो भनेर अस्पताल लान ठिक्क बनाइछन् । फेरी अर्को हाँसो सुन्नुस्, अब खेतबारी बाँझो राख्निलाई कुन्नि कति जरिवाना रे । उब्जाको कुरो कुहाएर फाल्नुभन्दा खेती नगरेकै बेस् भनेर गर्न छाडियो । अब कारबाही गर्न आउँदा सरखारलाई नै गरिखाउ भनेर खेतबारी सुम्पिदिने चाहना भाका म लगाएत धेरै छन् । अब यो सम्भव होला ? यस्तो हावाकुरा गरेर हामी जनताका वाहवाही पाउने कती भाग्यमानी ?
अब अर्को भाग हाँसो सुन्नुस् । सत्तामा हुँदा के गरे आफैँ जानुन् तर प्रतिपक्षमा हुँदा हनुमानले पहाड बोके झैँ के के न गर्छु भन्दै उफ्रनेहरुका समाचार नि हास्दा हास्दै मरिएला जस्तो हुन्छ । सरकारले दुइ तिहाई भएर हेप्यो रे, अब २ तिहाई अर्थात बहुमत भनेकै आफ्नो निर्णय पारित गराउन होत खै बुझेको ? जनताको लागी सरकार होइन हामी छौँ भन्ने अनि जनताले चाहेको नि गर्न नदिने क्या मज्जाका समाचार आउँछ आजकाल । गर्नलागे पेल्यो रे नगरे बहुमतले गरेन रे यही सुन्न पाएर होला आजकाल हास्य टेलिफ्लिम हेर्नै छोडियो । अहिलेको सरकार दुई तिहाइको सरकार, यो काम गरेरै छाड्छौँ भन्ने एकातिर, अनि दुइ तिहाइको दम्ब देखाएर हामिलाई हेप्यो भन्ने अर्कातिर । अनि समाचार आउँछ गजबको । यस्तो काम गर्छुःसत्तापक्ष, सदनमात्रै होइन सडक तताउँछौँः प्रतिपक्षी, वा क्या राम्रो शिर्षक बनेको । अनि यस्तै हावामा दौडेर नानाभाँती कमेन्ट गर्ने हामी जनता । करीब १०/१२ बर्ष यही मिडियामै झुण्डिराखेको म पनि सानोतिनो पत्रकार नै भनौँ । कैलेकाहीँ गोडा चारेक कार्यक्रममा पुग्या हुन्छु । त्यहाँ निम्तावाला अर्थात कार्यक्रम सञ्चालकले नेतालाई कडा सम्बोधन गर्दै बोलाउँछन् अनि नेता मख्ख पर्दै मञ्चमा पुग्छन् र ठोक्छन् गज्जबका भाषण अनि निरिह भएर सुन्छन् ति जनताहरु । आफु त नाथे बबुरो पत्रकार न परेँ न कसैको गुणगान गाउन सकिन्छ न अवगुण पैल्याउन । भाको समाचार यस्सो लेख्दियो अनि उही गुणगान गाएर मञ्चमा बोलाउनी वालाले कमेन्ट ठोक्छ “यि नेताहरुले नै यो देश बिगारेका हुन्” । बिचरा मलाई मात्रै होर ? उसलाई पनि त मेरो समाचार पढेर हाँसो लागेछ नी ?
मार्सी चामल काण्ड : दुर्गा प्रसाईँले ब्राण्ड बनाएपछि ९ क्विन्टल मार्सी चामल बिक्याे, किसानले दिए प्रसाइलाइ धन्यवाद्
उद्यमशिल किशोरीहरुका लागि सञ्चालित सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम पर्वतमा सम्पन्न